Kedu ihe kpatara "onye na-ese foto" na-eri ọtụtụ ihe onwunwe yana otu esi edozi ya | Esi m mac
Kedu ihe kpatara "onye na-ese foto" na-erepịakwa ọtụtụ akụrụngwa yana otu esi edozi ya
Ọ bụrụ na ị jiri Foto maka Mac iji mekọrịta foto gị na iCloud, ị nwere ike ịnwe ọnọdụ a: «Photo Agent» ngwa na-arụ ọrụ zuru ikike. Nke a na - adị mgbe ị na - arụ ọrụ Mac n’usoro na - achọ obere ego, Fans nke Mac na - amalite ịrụ ọrụ. Zọ kachasị mma iji chọpụta nke mmemme na-eri ọtụtụ akụ bụ imeghe nyochaa ọrụ, nke ị ga-ahụ na dashboard ma ọ bụ site n'ịkpọku ya ka ọ bụrụ ihe ngosi. Ozugbo inwetara mmemme ahụ, chọọ maka CPU taabụ ịmata ihe mmemme na - apịpụta processor gị Mac, ọ bụrụ na ọ bụ foto gị, nke karịrị 30%, nke a bụ ihe na - eme.
Ọ bụghị nsogbu na sistemụ arụmọrụ, ma ọ bụ site na itinye foto, ihe priori ihe niile na-arụ ọrụ dịka o kwesiri. N'adịghị ka, MacOS na - emekọrịta ozi anyị nwere na ngwa Foto yana ozi anyị nwere na iCloud: ihe onyonyo ahụ, kamakwa metadata nke foto ahụ, ihu wee mata na ha. Dabere na ọnụ ọgụgụ foto, usoro a ga-ewe karịa ma ọ bụ obere.
Nke a apụtaghị na ọ na-ewe iwe oge ụfọdụ, ọkachasị mgbe anyị na-arụ ọrụ n’ìgwè na-esighi ike. Agbanyeghị, usoro a na-achọ ijikọ ọnụ nke ọma na ọrụ ndị ọzọ ma ghara ibelata akụ nke ọrụ anyị na-arụ ọrụ ugbu a.
Bụlagodi, anyị nwere ike ịkwụsị usoro ahụ, nwa oge, ma ọ bụ na-adịgide adịgide. A na-atụ aro nke ikpeazụ naanị ma ọ bụrụ na ịnweghị iji Foto dị ka mmemme foto ndabara.
para nwa oge kpọnwụọ usoro ahụ, anyị ga-enweta ya foto mmasị. Iji mee nke a, anyị ga-emeghe foto wee pịa mmasị, site na ịpị ederede foto na ogwe dị n'elu, ma ọ bụ site na ịpị Cmd + (rikoma). Ugbu a, họrọ iCloud taabụ ma pịa: kwusi maka ubochi. Usoro ihe nnọchi foto ga-akwụsịtụ otu ụbọchị.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụsị usoro ahụ kpamkpam, gaa Ihe sistemụ, anya maka nhọrọ iCloud, ma pịa foto. Zọ a, Onye na-ese foto agaghị jikọọ ọzọ. Cheta, foto gị na iCloud agaghị emekọrịta na Mac a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Kedu ihe kpatara "onye na-ese foto" na-erepịakwa ọtụtụ akụrụngwa yana otu esi edozi ya
tvOS 11 dị ugbu a na mmemme beta ọha nke Apple